कोरोना संक्रमितको उपचार फोन र भिडियो कलबाट
Friday,03 April, 2020 | शुक्रबार, २१ चैत, २०७६
समाचार प्रवास स्वास्थ्य
कोरोना संक्रमितको उपचार फोन र भिडियो कलबाट १ सातासम्म पनि ठीक नभए मात्र अस्पताल लैजादैछ बेलायत
दिनेश गौतम काठमाडौं, १३ चैत
भर्खर एउटा मिटिङ सकियो । फेरि अर्को मिटिङमा पुग्नुु छ । दूतावासका प्रतिनिधि पनि आउँदै छन् । नेपालीको अवस्था कस्तो छ ? के गर्दै छन् ? पर्याप्त खाना छ कि छैन ? त्यसको विवरण संकलन गर्नु छ । समस्यामा परेकालाई उद्धार र उपचार पनि । स्कुल, विश्वविद्यालय, व्यापार व्यवसाय बन्द छ । अर्थात् ‘लकडाउन’ । बाहिर निस्कन पाइँदैन । दैनिकी जटिल छ ।
नेपाली समयअनुसार रातको १२ बजे हस्याङ फस्याङ गर्दै बेलायतको लिभरपुलबाट फोन सम्पर्कमा जोडिएका थिए प्राध्यापक डा. पदम सिम्खडा । उनी बेलायतको युनिभर्सिटी अफ हाडर्सफिल्डको ग्लोबल पब्लिक हेल्थ विषयका प्राध्यापक हुन् ।
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को प्रकोपसँगै उनको दैनिकी फेरिएको छ । भाइरस संक्रमण नफैलिएको हुन्थ्यो भने उनी यतिबेला विश्वविद्यालयको कक्षामा हुने थिए । तर, अहिले उनी बेलायतमा कोरोना संक्रमणबाट जोगिन जनचेताना फैैलाउने अभियानमा जुटेका छन् । उनी पब्लिक हेल्थसँग जोडिएकाले पनि उनको यो दायित्त्व हो ।
लकडाउनपछि बेलायतको अवस्था कस्तो छ ? कोरोनाका बिरामीको उपचार कसरी हुन्छ ? शक्ति राष्ट्र बेलायत कहाँकहाँ चुक्यो ? कोरोना नियन्त्रणका लागि कस्ताकस्ता पहल भएका छन् ? बेलायतमा रहेका नेपालीको अवस्था कस्तो छ ? बेलायतबाट नेपालले थप के सिक्ने ? यिनै विषयमा हामीले डा. सिम्खडासँग कुराकानी गरेका छौँ ।
डा. सिम्खडासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ः
६६ मिलियन नागरिक बस्ने बेलायत सुनसान छ । अर्थात् लकडाउन । १ हप्तादेखि स्कुल, विश्वविद्यालय बन्द छन् । बाहिर हिँडडुल गर्न पाइँदैन । अत्यावश्यकका लागि ट्रेन र बस सीमित मात्रामा चलेका छन् । १६ हजारमा कोरोना देखिएपछि २ जना सँगै सडकमा हिँड्न रोक लगाइएको छ ।
एउटै परिवारका २ सदस्य पनि हिँड्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । यदि हिँडेमा फाइन लाग्छ । बेलायत सरकारले नियम उल्लंघन गरेर हिँड्नेलाई ३० पाउन्डको जरिमाना लगाउँछ । बेलायत सरकारले कडाइ गरेको छ । तर, डिँडडुल गर्न अहिलेसम्म लाइसेन्स भने लिनुपरेको छैन ।
डर र त्रास
आफूबाट अरुलाई, अरुबाट आफूलाई कोरोना सर्ला कि भन्ने डर । उपचार नहोला या खानाको अभाव होला, के हुने हो ? के गर्ने हो ? यस्तै डर र त्रास बेलायती नागिरकसँगै यहीँ रहेका नेपालीमा पनि छ ।
चीनमा बढी ६० वर्षमाथिकालाई कोरोना लागेको थियो । तर, युरोपमा अलि फरक छ । स्वाभाविक हो बढी उमेर भएकालाई लाग्ने । तर योङलाई पनि यो रोग लागेको छ ।
प्राथमिकताका आधारामा उपचार
अब कुन उमेरका मान्छेलाई बचाउने ? बुढाबूढीलाई बचाउने कि योङलाई ? कसलाई बचाउँदा फाइदा हुन्छ भनेर सोच्ने बेला आएको छ । कतिपय देशले बचाउनुपर्ने मान्छेलाई पहिलो प्राथमिकता दिएरसमेत उपचार गरिरहेका छन् । यदि प्रकोप झन् बढ्यो भने प्राथमिकताका आधारमा उपचार गर्नुको विकल्प हुँदैन ।
डे टु डे पेमेन्टमा काम गर्ने मजदुर मारमा
यो समयमा जागिर गए पनि सरकारले ८० प्रतिशत दिन्छ डे टु डे पेमेन्टमा काम गर्ने मजदुरलाई । तर, जागिर नगरेर आफ्नो व्यवसाय गर्ने मारमा परेका छन् । उनीहरूले खानाको जोहो कसरी गर्ने भन्ने समस्या देखिन थालेको छ । अभाव नभए पनि कसरी जोहो गर्ने भन्ने समस्या छ ।
संक्रमितको उपचार फोन र भिडियो कलबाट
बेलायतमा कोरोना संक्रमणको लक्षण देखिए तत्कालै अस्पताल जान पाइँदैन । पहिलो चरणमा चिकित्सकसँग फोन वा भिडियो कलबाट आफ्नो रोगको लक्षण भन्नुपर्ने हुन्छ । फोनबाटै डाक्टरले सल्लाह सुझाव र परामर्श दिने गरेका छन् ।
एक हप्ता घरकै आइसोलेसनमा बसेर उपचार गर्ने । त्यसपछि पनि ठीक नभए मात्र थप उपचारका लागि अस्पताल जाने व्यवस्था गरिएको छ । अनि अस्पतालले आइसोलेसनमा राखेर कोरोना हो होइन परीक्षण गरेर उपचार गर्ने गरेको छ ।
समयमा लकडाउन नगर्दा धेरै फैलियो
चीनबाट सुरु भएको कोरोना अहिले युरोप र अमेरिकामा बढी देखिएको छ । कारण समयमा लकडाउन नगर्दा हो । यदि सुरुमै लकडाउन गरेको हुन्थ्यो भने बेलायतमा यति धेरै संक्रमण फैलिने थिएन ।
बेलायत सरकार लकडाउनको सम्बन्धमा चुकेको देखिन्छ । चाइनाले सुरुमै लकडाउन गरेर रोकथामका लागि राम्रो काम गर्‍यो । जसको परिणाम चीन काेराेना भाइरस नियन्त्रण गर्न छिट्टै सफल पनि भयो । तर, युरोप र अमेरिकामा त्यस्तो हुन सकेन । किनभने शक्ति राष्ट्रको आर्थिक गतिविधि तहसनहस हुन्छ भनेर लकडाउनमा ढिलाइ गरियो ।
विकसित देशको बिज्नेस लिङ्क धेरै देशसँग हुन्छ । त्यसैले विकसित देशहरूमा यो रोग युरोप र अमेरिकामा फैलियो भन्ने अनुमान पनि भइरहेको छ ।
एक जना मानिसले दिनमा २ जनालाई यो रोग सार्छ । ती २ जनाले अरुलाई सार्छन् । हो यसरी नै फैलियो । समयमा नै लकडाउन गर्न पाएको भए यसरी फैलिने थिएन ।
ढिला लकडाउन भए पनि सरकारले रोकथामका लागि कुनै कसर बाँकी राखेको छैन । प्रधानमन्त्रीले हरेक दिन प्रत्रकार सम्मेलन गरेर रोकथामका कार्य भइरहेको र आगामी चालिने कदमबारे जानकारी गराउने गरेका छन् । सरकारले कोरोना उपचारका लागि नयाँ अस्पताल निर्माणमसेत सुरु गरेको छ ।
नेपालीको अवस्था जटिल
नेपालीको अवस्था पनि जटिल छ । किनभने अमेरिका अस्ट्रेलिया, खाडी मुलुकभन्दा लन्डनमा बस्ने नेपाली बढी उमेरका छन् । नेपाल र बेलायतको सम्बन्ध धेरै अगाडिदेखि जोडिएको छ । पूर्व गोर्खा सैनिक बेलायतमा छन् । रिटायर्ड लाइफ बिताउने उमेरका धेरै छन् । त्यसैले बुढाबूढीको संख्या धेरै भएकाले उनीहरूलाई छिटो रोग लाग्ने र त्यसबाट अरुलाई सर्ने चिन्ता र त्रास छ ।
उच्च शिक्षाका लागि नेपाली विद्यार्थी बेलायतमा पनि छन् । विश्वविद्यालय बन्द छ । तर, पढाइ अनलाइनबाट भइरहेको छ । घरमै बसेर विद्यार्थीले पढ्न पाउँछन् । सीमित समय मात्र काम गर्न पाउने भएकाले विद्यार्थीलाई बढी समस्या छ । के खाने के गर्ने भन्ने अन्योल छ ।
दूतावास र संघसंस्था सक्रिय
यो समयमा दूतावासको समन्वयमा संघसंस्था पनि नेपालीको समस्या समाधान गर्न जुटेका छन् । कसलाई के समस्या छ ? त्यसको पहिचान गरेर उद्धारका काम भइरहेका छन् । दूतावासले हटलाइन नम्बर दिएको छ । हटलाइन नम्बरमा फोन गरेर समस्या समाधान गर्ने गरिएको छ ।
नेपालले कोरोना रोकथामका लागि के गर्ने ?
रोगले धनी वा गरिब देश भन्ने होइन । यो रोग इम्युनिटी पावर कम भएका व्यक्ति र चिसो ठाउँमा बस्नेलाई छिटो लाग्ने देखिएको छ ।
नेपालले समयमा नै लकडाउन गरेको छ । यो राम्रो पक्ष हो । तर बेलायतजस्तो देशमा त यस्तो समस्या भयो भने नेपालमा झन् धेरै फैलिए कसरी उपचार गर्ने भन्ने समस्या छ । सीमित हस्पिटल छन् । दिनमा ६ सयभन्दा बढीको टेक्सट गर्ने सामर्थ्य छैन । त्यसैले तत्काल यो बढाउनुपर्छ । रोग लागेका र शंका लागेकालाई तत्काल आइसोलेसनमा राख्ने हो भने नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । नत्र कठिन छ ।
अनावश्यक मान्छेलाई हिँडडुल गर्न दिनु हुन्न । चीनसँगको व्यापारिक सम्बन्धका कारण युरोप र अमेरिकामा यो सरेको हो । त्यसैले विदेश आवातजावतमा रोक लागाउनुपर्छ । नयाँ कोरोना उपचारको सेन्टर बनाउनुपर्छ । पालको अस्पताल बनाएर थाम्दैन ।
र यो संक्रमणबाट आफैँ जोगिने हो । सजकता अपनाउन खेलाँची गरिनु हुन्न । विभिन्न माध्यमबाट कोरोनाबाट कसरी जोगिने भन्ने सन्देश आइरहेका छन् । ती सन्देशलाई पूर्ण रूपमा पालना गरौँ । जहाँ छौँ त्यहीँ बसेर रोग फैलिन नदिऔँ । त्रसित भएर होइन, संयमित भएर यस महामारीकाे सामना गर्नुको विकल्प छैन ।
खाेकीका बिरामीले ४ वटा अस्पताल चहार्दा पनि पाएनन् उपचार
कोरोना जित्न यस्ता छन् मनोविद् डा. गंगा पाठकका सुझाव
अनि चालकले भने तोइट ! कस्ती रै’छे
कोरोना जित्ने विकासानन्दका ७ टिप्स
कोरोना जोखिम: ७४ लाख बालबालिकालाई कसरी जोगाउने ?
प्रकाशित मिति: बिहीबार, चैत १३, २०७६, १२:०२:००
#काेराेना त्रास #काेराेना बेलायत
फोहोर व्यवस्थापकका लागि केयूका विद्यार्थीले बनाए पीपीई
कोरोना कोषमा प्रभु बैंकको १ करोड १ लाख रुपैयाँ
सुरक्षाकर्मीलाई दैनिक ३ सयदेखि शत प्रतिशतसम्म भत्ता
राहतले विपन्न परिवारमा खुसी
मलेसियामा लकडाउन उल्लंघन गर्ने ४ नेपालीलाई जरिमाना र जेल सजाय
डडेल्धुरामा कोरोना आशंका गरिएका युवकको रिपोर्ट 'नेगेटिभ'
सिमानामा रहेका नेपाली १४ दिन नेपाल प्रवेश गर्न नपाउने
को हुन् कोरोना संक्रमित छैटाैँ नेपाली ?
आवश्‍यक मापदण्ड पूरा गरेर भोलिदेखि उद्योग खोल्न पाइने